Muxuu damacsan yahay Jawar Maxamed, ninka ay kala boodeen Abiy Axmed? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, JAWAR MOHAMMED
Jawar ayaa ah shakhsi aad u saameyn badan
Jawar Maxamed oo lagu sheego in uu yahay qofkii ka dambeesay isbadelkii ka dhacay dalka Itoobiya oo la hadlay teleefishinka Al Jazeera ayaa ka warramay dibad baxyada lagu taageerayo isaga ee ka taagan dalka Itoobiya.
Jawar ayaa Al Jazeera u sheegay in uu doonayo in uu ku biiro siyaasadda Itoobiya, kana fikiraya in uu tartamo doorashada xigta ee la filayo in dalkaas ay ka dhacdo sanadka dambe.
Inkastoo aysan kala cadeyn xilka uu doonayo in uu u tartamo ayaa haddana waxaa jirta in uu heysto dhalashada dalka Mareykanka, taas oo ah caqabada koowaad ee hor istaagi karta damiciisa siyaasadeed, maadaamaa dastuurka dalka Itoobiya uu dhigayo in qof heysta dhalashada dal ajnabi ah uusan xil ka qaban karin dalkaas.
In qofka uu ra'iisul wasaare ka noqdo dalkaas ayaa waxaa uu u baahan yahay in ay taageeraan xubnaha xisbiga talada haya ee EPRDF. Sidoo kale in shakhsi uu Madaxweyne ka noqdo mid ka mid ah dowlad deegaanada sida Oromiya oo kale ayaa sidoo kale waxaa looga baahan yahay in uu noqdo xildhibaan golaha deegaanka, kadibna uu kamid noqdo guddiga fulinta ee xisbiga talada haya ee deegaanka.
Waxaa jiray warar sheegaya inay isaga iyo ra'iisalwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo horay xulafo u ahaa ay kala boodeen.
Jawar Maxamed ayaa sheegay in habeenkii khamiista lagu wargaliyay illaaladiisii ciidanka dowladda ka mid ahaa in ay meesha baneeyaan, iyada oo aan isaa lagu wargalin, balse illaaladii ay diideen amarkii la siiyay, isagana ay wargaliyeen. Taas ayuu ku tilmaamay fal la doonayay in isaga lagu dayoco amnigiisa, kadibna dad lasoo abaabulay ay guriga kusoo weeraraan.
Taliyaha booliiska Itoobiya ayaa beeniyay in ay bixiyeen wax amar ah oo ku saabsan illaalada Jawaar.
Waa kumaa Jawar?
Xigashada Sawirka, Jawar Mohamed
Magaciisa oo seddexan waa Jawar Siraaj Maxamed wuxuuna u dhashay qowmiyadda Oromada, waana nin Muslim ah.
Jawar wuxuu 12-ka bisha May 1986, uu ku dhashay magaalada yar ee lagu magacaabo Dumuga oo ku taalla xadka ay wadaagaan gobolladi hore ee Arsi iyo Harar.
Jawar dugsigisa hoose wuxuu ku dhigtay dugsiga Katolika oo Asella ku yaalla. Dugsigiisa sarena wuxuu ku bartay magaalada Adama isaga wuxuuna ka baxay sanadkii 2003.
2006-dii markii uu dhiganayey jaamacadda Standford wuxuu Jawar aasaasay Ururka Dhalinyarada Oromada Caalamka (IOYA), isaga oo billaabay inuu u dhaqdhaqaaqi inuu dhalinyarada Oromada ee dibadaha ku nool ay midoobaan si ay u raadiyaan qaddiyadda qowmiyadda Oromada.
Kacdoonkii Itoobiya ayaa sababay in uu iscasilo ra'iisul wasaarihii hore
Jawar Maxammed ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay xubin ka ugu muhiimsan ee aasaasay ururka dhalinyarada Oromoda ee 'Qeeroo' oo dalka gudahiisa mudaharaadyada sababay iney dowladda isbeddesho sameeynayey.
Gaar ahaanna Jawar waxaa si gaar ah uu ugu soo caan baxay jidgooyooyinki maalmaha socday ee lagu sameeyey jidadka soo gala caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa, ugu dambeyntina sababay inuu ra'isal wasaarihi hore ee Itoobiya Haile Mariam Desalegn uu iscasilo xilkana uu la wareego Dr Abiy Axmed oo qowmiyadda Oromada u dhashay.
Gantaallo laga soo tuuray meel ka baxsan dhulka Falastiin oo Israel ku dhacay